Savorovoro teny Analakely Tetika hanesorana an�i Neny ?
Dian’i Didier Ratsiraka tany Rosia Misy ifandraisany amin’ny “Iles Eparses” ?
Mifoha indray ny fitakiana ny “Iles Eparses” ary tsy vao ela no nisy kandidà ho filoham-pirenena iray nametraka fitoriana mitaky ny hamerenana ireo nosy Malagasy ireo an`i Madagasikara teny amin`ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana.
Rivo Rakotovao Olana lehibe ho an’ny fitondrana
Tsikaritra ho tena olana lehibe ho an’ny fitodrana Rajaonarimampianina i Rivo Rakotovao, filohan’ny antenimierandoholona sady Filoha nasionalin’ny HVM, sokajiana ho laharana faharoa eto amin’ny firenena.
CENI Madagascar Zava-dehibe ny famolavolana sarintany
Hifarana anio ny atrikasa fampiofanana niarahan`ny sampandraharahan`ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana (PNUD) sy ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (PNUD) mahakasika ny fanangonam-baovao amin`ny famolavolana ny voka-pifidianana. Atoa
Fifidianana filoham-pirenena Misy kandida tiana hailika mafy
Nivoaka iny ny fepetra henjana takiana amin’ireo kandida filoha sy ny fampitandreman’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) Jean Eric Rakotoarisoa, izay tsikaritra fa Ravalomanana no mety kendrena hofinganina amin’io.
Mpitondra sy mpitolona Ady sarotra aravona
Efa nazava hatrany am-boalohany, raha mijery ny kabarin’ny praiminisitra vaovao, Ntsay Christian, hatramin’ny nandraisany fahefana fa tsy hamaha ny olan’ireo sendika marobe “mitolona” etsy sy eroa mihitsy akory no iraka nampanaovina azy fa ny hahatanteraka fifidianana.
Fanimbazimbana ny HCC Sinema sy fambolena gidragidra ?
Tsy rony tsy ventiny teo, dia raikitra ny karazana fanenjehana ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC Jean Eric Rakotoarisoa sy io andrim-panjakana tantaniny io, voizin’ny gazety sy haino aman-jery mpanohana fitondrana amin’izao fotoana.
Justice et Paix sy KMF/KNOE Hitambatra hanara-maso akaiky ny fifidianana
Omaly alatsinainy 16 jolay no natao tetsy amin’ny Episcopat Antanimena ny fanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa amin’ny KMF/KNOE sy ny Komisiona Episkopaly JUSTICE ET PAIX (JEP).
Rehefa natao ny fanadihadiana rehetra dia nahafantatra tsara ny zavatra nataony ireo andiana miaramila tonga teny amin�ny lapan�ny tan�na Analakely ny alarobia hariva lasa teo.
Nisy mihitsy ny fihetsika natao mba nanindriana aloka ny kaominin’Antananarivo Renivohitra. Ny mpitantana no tena lasibatra teto. Tsy niitatra be tahaka iny mantsy ny fifandirana teo amin’ny polisy monisipaly izay manao ny asany ara-dalàna sy ilay vadina miaramila ambara fa voakasi-tanana. Ny miaramila avy ao amin’ny Capsat Soanierana sy ny RAS Ampahibe no nanao be fiavy teny amin’ny lapan’ny tanàna Analakely, soa fa teo ihany ny Emmo reg nanelanelana sy nisoroka ny mety fifandonana hitranga. Miha mazava ankehitriny ny raharaha. Tsy tongatonga ho azy ireny fa fanararaotana tranga iray mba hanaratsiana endrika tsotra izao ny kaominin’Antananarivo Renivohitra sy ireo mpitantana azy. Raha tsorina, ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana mihitsy no ezahan’ny sasany hosoketaina fa manome baiko ny polisy monisipaly hikasi-tanana ny mivarotra amoron-dalana.
Hosoloina PDS ?
Mazava tsara anefa ny resaka fa olon’ny fifampiresahana sy ny fifandeferana i Lalao Ravalomanana fa ireo izay mety mahita tombontsoa amin’ny faminganana azy no be resaka etsy sy eroa. Paikady tsy vahiny amin’ny mahalala ny tontolo politika iny natomboka tamin’ny alarobia hariva eny Analakely iny fa dia tafiditra ao anatin’ireo dingana handrodanana ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ka hametrahana PDS indray eto an-drenivohitr’i Madagasikara. Miafina any ambadik’ireo milaza ho mpivarotra amoron-dalana ireo olona mivoy io resaka io. Misy efa fantatra ihany moa izy ireo fa hanohy ny fanadihadiana ny mpanao gazety ary tsy maintsy avoaka eo ihany marina satria tsy mety ny mifamitaka sy mifampiesona.Misy koa ny manampahefana ambony mijapy ny raharaha tahaka izao ary tsy maintsy ho fantatra eny ihany izy io satria tsy misy governemanta maharitra mandrakizay izany eto e !